Nosy Maorisy : taratry ny fandrosoana eto amin'ny OI
Nosy kely 850 kilometatra eo ho eo miala amin'ny Madagasikara i Maorisy. Port-louis no renivohitra saingy misy ireo tanàn-dehibe mandrafitra ny nosy manontolo toa an-dry Curpipe, Balaclava, Quatre-Bornes sy Rose Hill ary ny Nosy Rodrigues. Kely nefa azo itarafana sahady ny endriky ny fandrosoana sy ny fampandrosoana eto amin'ny fari-dranomasina Océan Indien.
Mivelona amin'ny fambolena fary, fanodinana siramamy ary ny fizahantany ity firenena iray ity. Marobe rahateo ireo foko monina sy miasa ao ka samy mitondra ny traikefany avy ny tsirairay. Isan'ny mampiavaka an'i Maorisy ny foto-drafitrasa. Ny lalana migodana misasaka roa eo afovoany ka sarotra ho an'ny mpamily ny hangalatra ilay atao hoe "file"; Izay izorana mankany aloha no tanjona ary rehefa tojo ireo faribolana lehibe hiodonana vao manahazo mifindra na mivily. Ny trano rehetra dia miorina manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra miala ny arabe ka ireo tamboho no manefy azy. Sanatria ny hahita trano amoron-dalana 0,5 metatra miala amin'ny alehan'ny fiara. Manginy fotsiny ny fahadiovana.
Mahasarika vahiny maro i Maorisy ary ambohi-pihaonan'ny olona avy amin'ny vazan-tany efatra. Karana, Japoney, Alemà, Frantsay, Sinoa eny hatramin'ny Malagasy tonga miala sasatra any avokoa. Lafatra sy madio avokoa ny toeram-pandraisam-bahiny rehetra, mahay mandray olona any mahay fiteny maro ireo mpiasa amin'ny hotely lehibe ankoatra ny kreola, ny frantsay ary ny anglisy fampiasa andavan'andro. Anjaran'ny mpitsangatsangana kosa ny manomana vola misimisy hiatrehana ny dia sy hiantohana ny trano, sakafo, fitaterana ao an-toerana. Tsy azo adinoina ny fananana taratatasy ara-dalàna manamarina ny fijanonana any ary araka ny fantatra dia mila manana 100 euros isan'andro ankoatra ny famandrihan-toerana amin'ny hotely ny olona iray hivahiny. 14 andro ihany no fe-potoana azo hijanonana ary mila havaozina ny "visa" raha hanalava izany. Hentitra ary azo lazaina ho masiaka ireo polisy eo amin'ny fadin-tseranana sy miaro ny sisin-tany.
Manapariaka ny fampandrosoana maharitra ny Maorisiana ka miandany amin'ilay hoe "Maurice, île durable". Fotsy manjopiaka ny tora-pasika, madio ny ranomasina (tsy ahitana zava-maniry mieloelo na rano mavo na manopy mena fa fotsy na manga tanteraka), maniry ny maitso. Mahasaro-piaro ireo mponina izany rehetra izany ka mandrisika azy hikajy ny harena hananany. Rahoviana re vao ho hita eto Madagasikara izany? Ny fialana amin'ny havoretrana no dingana voalohany mila tanterahina dia madio ho azy ny zava-drehetra, manomboka amin'ny vatana, ny toe-tsaina ka hatrany amin'ny fitantanana.